Tag: zvinoburitswa | Martech Zone
Kana iwe uri wekutanga hukama hweveruzhinji, ita shuwa yekutarisa iyo yakazara Gwaro kune PR naBrownstein & Egusa. Uye kuti uwane rumwe ruzivo nezve nzira dzePR, ita shuwa kuti uverenge iyo positi yevaenzi - Zano rePR Kubva Kubva kune Aimbove VentureBeat Munyori - kubva kuna Conrad Egusa pane inoshamisa blog yaScott Monty. Kutenda kwakakosha kuna Marty Thompson wekuwana! Dai ndanga ndichizowedzera chero chinhu, ingave iri nhanho kumwe pakati pe3
Nzira yekukura Bhizinesi Rako Uchishandisa Zvemukati Kushambadzira
China, Gunyana 12, 2013 Muvhuro, September 16, 2013 Douglas Karr
Ichi chienzanidzo chinonakidza icho Dendrite Park yakapa kuti ini ndisagone kubvumirana nezvimwe. Ivo vanopa nzira yakawanda-yakatwasuka kune yako yemukati kushambadzira zano iyo inoda yakakura base uye inokura kubva ipapo! Uyu muti wenjere wekushambadzira zvemukati kune rako bhizinesi. Iyo yakasimba midzi (IT zvivakwa, SEO uye analytics) zvakakosha kuchengetedza trunk (yako webhusaiti) kutakura huremu hwemagariro enhau zviitiko (korona) inounza iwe
Kiyi kune akawanda ma link andinogovana uye zvinyorwa zvandinonyora pane ino blog ndeyomuchina. Chikonzero chacho chiri nyore… pane imwe nguva, vatengesi vaigona kuzungunusa vatengi nechiratidzo, logo, jingle uye mamwe mapakeji akanaka (ndinobvuma kuti Apple ichiri yakanaka pane izvi). Masvikiro aive eunion-akanangana. Mune mamwe mazwi, Vatengesi vaigona kutaura nyaya uye vatengi kana B2B vatengi vaifanira kuigamuchira… zvisinei nekuti yaive yechokwadi sei.